Rotary Multi-Tool Accessories ဆိုတာဘာလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / Rotary Multi-Tool Accessories ဆိုတာဘာလဲ။
views:101 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-04-03 မူလ:ဆိုက်ကို
မြန်နှုန်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏မူလစိတ်ကူးအလုပ်မဖြစ် rotary tool ကိုတစ် ဦး အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း bit ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၏အခြေခံပေါ်မှာပိုမိုမြန်ဆန်လှည့်မြန်နှုန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်တိုးဆChuck ။ ကွဲပြားသောအမြန်နှုန်းများကိုဗားရှင်းနှင့်မော်ဒယ်များဖြင့်တွေ့နိုင်သောဗားရှင်းနှင့်မော်ဒယ်များဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။ ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးယန္တရားတွင်မူကွဲများကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားထည့်နိုင်သည်Rotary Tool Accessoriesရန်တိုးဆမတူညီသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်မတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကစားနိုင်ရန်မတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကစားနိုင်ရန် Chuck
ချွန်ထက် / ဖြတ်တောက်ခြင်း
သန့်ရှင်းရေး / polishing
Multi-toolTies စက်များသည်အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာများသို့မဟုတ်အိမ်တွင်အသေးအဖွဲပြုပြင်ခြင်းများတွင်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့်ကျဉ်းမြောင်းသောသို့မဟုတ်လက်လှမ်းမသောနေရာများနှင့်နေရာများတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သော်လည်းလူအများစုသည်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုမသိကြပါMini Rootary Tools actesiesဖြစ်ကြ၏။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုအတိုချုပ်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။ ဤဆောင်းပါးသည် Multi-toolTs Multies စက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏အသုံးပြုမှုနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအလေးအနက်ထားပါက၎င်းတို့သည်သူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်သူတို့အသုံးပြုသည်ကိုပိုမိုနားလည်စေရန်အလေးအနက်ထားသည်။
Collet Chuck သည်အရေးကြီးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်.ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်ကွဲပြားခြားနားစွာမတူကွဲပြားစွာဖြေရှင်းနိုင်သည်သတ္တုများအတွက် rotary file လေ့ကျင့်ခန်း bitsအချို့သောယန္တရားတွင်နှင့်အခြေခံအကျဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်.
ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်,လျှပ်စစ် rotary tool ကိုsအခြားဝက်အူလှည့သော bits အပါအ0င်၎င်းကို s ကိုကဲ့သို့သောအခြားချွန်ထက်သောကိရိယာများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်aws, ပုဆိန်, ဓါးသွားနှင့်အတူ.
ဒီလိုမျိုးမျိုးRotary Files Rootary Toolsupolishing သတ္တုများ, ကျောက်, ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်ပလတ်စတစ်များအတွက် polishingနှင့်အထူးသဖြင့် polishing ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်စိန်ငါးပိနှင့်အတူအသုံးပြုခံရဖို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ဒီသဲတီးဝိုင်းနှင့်ဗုံဖြစ်ကြသည်စုံလင်သောသံချေး, ဆေးသုတ်ခြင်း, သတ္တုများပေါ်တွင်လေးလံသောချေးခြင်း, သူတို့က mandrel ပေါ်သို့လျှောချထားပြီးအဆုံးမှာဝက်အူကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။
သင်အသုံးပြုနိုင်သည်Rotary Tool Cutterဝက်အူခေါင်းများ၏ထိပ်, လက်သည်း, သို့မဟုတ်ဘယ်အချိန်မှာဖြတ်တောက်ဘို့အလုပ်အချို့လုပ်ခြင်းထိုကဲ့သို့သောသတ္တုဓာတ်နှင့်ပလတ်စတစ်များကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့်အတူ။
ဒီ discs တွေကိုဖြစ်သဲတီးဝိုင်းထက် gentler ။
ဒီ tool ကိုမတူညီတဲ့ install လုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်Rotary Tool နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံsထိုကဲ့သို့သောခံစားခဲ့ရဘီးသို့မဟုတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသကဲ့သို့-အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘီး, ၏အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားနေစဉ်Sanding တီးဝိုင်း။
ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းမီတာဖြစ်ပါတယ်အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်၏အာဒံနှင့်အလူမီနီယမ်, ကြွေထည်ကြိတ်စင်း, ဖန်နှင့်မှန်များကဲ့သို့သောပစ္စည်းများအပေါ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီလိုမျိုးမျိုးMini Hand Darrary Rotary Tools များအချို့သောအသေးစိတ်အလုပ်အတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်,ဖြတ်တောက်ခြင်း, ထွင်းခြင်း, ထွင်းထုခြင်းနှင့်လည်းအနည်းငယ်ထိထိမ်းမြားရန်နှင့်ပြီးဆုံးရန်လိုအပ်သည့်အခါအသုံးပြုသည်။
ယခုတွင်သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ရိုးရှင်းသောနားလည်မှုရှိသည်မစ်ကြီးMulti-ကိရိယာများနှင့်ဤRotary Tool Accessories Kitsကိုယ်ပိုင်လက်မှုပညာနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။ ပညာရှင်များနှင့် Diy ချစ်သူများတို့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံလိုကြသည်မစ်ကြီးသူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာအတွက်ကိရိယာများ.
Dremel Japanmate Rotary Tool အလုပ်မဖြစ် rotary tool ကို Rotary Tool Accessories Mini Rootary Tools actesies သတ္တုများအတွက် rotary file လေ့ကျင့်ခန်း bits လျှပ်စစ် rotary tool ကို Dremel လျှပ်စစ် rotary tool ကို Rotary Files Rootary Tools Dremel Rotary Tool Cutter Rotary Tool Cutter